I-Semalt Iingcali ezikhokelayo Ukukwenza ntoni xa iSigxina seThuthi sisisantsi
Kufana nesibongo xa ubona ukuba ukusebenza kwakho kwe-SEO kuhlonywe ngu-Google okanye ezinye iinjini zokukhangela , kwaye akukho ndlela yokukrazula le ngxaki. Ukuze ufumane i-traffic organic kwisayithi yakho, kufuneka udlale ngamagama angundoqo, upapashe amanqaku aphambili, kwaye uchaze uluphi uhlobo lwesicwangciso socwangciso lwe-injini yokukhangela kwi-website yakho.
Kufuneka ukhumbule izinto ezilandelayo, ezikhankanywe apha nguJason Adler, ingcali ehamba phambili Semalt , ukujongana nemicimbi enxulumene ne-SEO.
Impikiswano yeGunya: Hlola ii-Webmaster Tools
Into yokuqala neyona nto ibalulekileyo kukuba kufuneka uhlolisise izixhobo ze-webmaster kwaye ufumane iingcebiso zobuchwepheshe apho. Hlala uhlaziywa kunye nezixhobo zakutshanje kwaye uzenzele ezimbalwa ukulawula imiba enokubangela ukuwa kwexeshana kwindawo yokusebenza kwesiza sakho - pc temperature reading.
I-Bing ne-Google inikezela abasebenzisi babo izixhobo ezininzi. Ungazigcina uhlaziywa kunye nabo kwaye ugweme nayiphi na isohlwayo kwiwebhusayithi. Ukuba unayo yonke imfuneko yamathuluzi webmaster, kukho amathuba ukuba iwebhusayithi yakho iza kufumana isikhundla esihle kwiinjongo ze-injini yokukhangela. Ukuba awuzange ubhalise kwaye uqinisekisile iwebhusayithi yakho kunye nezixhobo, unokwamkela ingxaki kwiintsuku ezizayo.
Ukubaluleka kweNkcazo: Hlola i-Analytics
Ukuba zonke izixhobo zakho ze-webmaster zibukeka kakuhle, kufuneka uye kwimibandela yokukhangela yeGoogle ukuqinisekisa iingxelo zeGoogle zendlela yokukhangela kwendalo. Qinisekisa ukuba iyafana nemigangatho yerinjini yokukhangela. Ngaphandle koko, isayithi lakho liyakuthi lithinteke. Ukuba iingxelo ziyahluke, bekuza kubakho umba ofuna ukuwukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
Kufuneka uhlale uqwalasela ukusebenza kwendawo yakho kwaye ungayivumeli ukuba iyancipha nayiphi na indleko. Emva kokuba usombulule yonke imiba yobugcisa, isinyathelo esilandelayo kukuba uhlaziye utshintsho lwewebhusayithi yakho kwaye ugcine ugcine. Utshintsho lwamanqaku akho kufuneka luchaphazeleke kangangoko kunokwenzeka. Khuphela iingxelo ezivela kwi-Google Analytics nsuku zonke uze uziqhathanise nomnye ukuze ugcine uluphi uhlobo lweenguqu olufunekayo kwicala lakho.
Ukujongana nemiba ye-algorithmic, kufuneka ukhangele amagama akho kunye namagama. Kufuneka uqaphele ngokugqithiseleyo ukuba bafumana indawo ye-traffic quality okanye hayi, kwaye konke oku kunokukhangela kwi-Google Analytics ngokukhululeka.
Isinyathelo esilandelayo kukuba uhlole iThuluzi lePenguin uze ubhalisele apha. Kufuneka udale i-akhawunti ye-Google kwaye unamathisele ama-analytics akho ukuze ufumane izibuyekezo eziphambili ze-algorithm ze-Google rhoqo. Esi sixhobo siza kukuxelela ukuba ukusebenza kwewebsite yakho kunciphisa kwaye yintoni isizathu esinokuthi sinjalo. Ukuba kukho imbambano kunye nesiza sakho kunye ne-algorithm yayo, isixhobo sePenguin siya kukugcina. I-Google ingasifumana kwaye iluhlu lwamanqaku akho xa ungayisombululi loo mbandela ngokukhawuleza. Kufuneka uhlalutye rhoqo iinkqubo zakho ze-SEO uze ukhethe ezo zinto zingabonakala zilungile kwiwebhusayithi yakho. Hlela amanqaku amgangatho ophantsi kwaye faka amagama asemgangathweni afunekayo kuzo i-rankings engcono ye-injini.